प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा डेरा खोज्दै सांसद ! — Motivate News
प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा डेरा खोज्दै सांसद !
Posted on January 23, 2018 by Ghanshyam Shrestha
बुटवल\_हेटौँडा – शपथग्रहण सकिँदा नसकिँदै गुल्मीका सांसद सुदर्शन बलाललाई चिन्ताले सतायो–डेरा कहाँ खोज्ने। संसद् बैठक छिट्टै बस्नेवाला छ। साथीको घरबाटै काम चलाइरहेका यी माननीय केही दिनभित्रै डेरा खोजेर सर्ने तयारीमा छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।